द्वारिकलाल भन्छन्, ‘आफ्नै घडेरी बेचेर भएपनि डोजर चलाउँछु’ (पुरा भाषण सहित)
एक जना कर्मचारी थिए लाल खोल ओढेर नक्कली सर्टिफिकेटवाला थिए, बिदाइ गरिसकियो । अर्का थिए इन्जिनियर राम खड्का, जसले
घरनक्सा सम्पन्नमा कति खायौ भनेर सोधेँ, बोल्न सकेनन् । मैले मौन स्वीकृति लक्षणम् भन्ने कहावत छ, मैले भनेँ, योर जब इज फिनिस्ड ।
पत्रकारले लेखे, कर्मचारीलाई गलहत्याएर निकाले
आज कर्मचारीलाई निकाल्दा केही पत्रकार रोइरहेको छ ।
ष्टाचारको के प्रमाण रे ? व्यापारीले सामान तिमिलाई दिन्छु भन्दा कम रेट, भुक्तानी लिँदा बढी रेट, योभन्दा बढी प्रमाण भ्रष्टाचारको के चाहिन्छ ?
सुरक्षित अवतरणको बाटो दिन्छु अहिलेसम्म जागिर खायौ, राजिनामा देऊ । अन्यथा सेतो सर्ट र निलो पेन्टमा टाइ झुण्ड्याएर जागिर खाने ?
जनकारवाही हुन्छ । जनतालाई आह्वान गर्छु । यी हुन् भ्रष्टाचारी मोसो लाएर टिन ठटाएर शहर घुमाइनेछ ।
यहाँ दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार छ, तर अहिले पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यहाँ पनि त्यो अभियान चलाउन जरुरी छ ।
त्यसैले मैले पनि इटहरीमा आफ्नै पार्टीको जिल्ला कमिटिको सदस्यलाई थप्पड हानेर महान चिनियाँ महान् सर्वहारा क्रान्तीको सुरुवात गरेको हुँ ।
सबै नेता, कार्यकर्ताको छानविन गरौं । पैतृक सम्पत्ती आधा सकियो, तर द्वारिक चौधरीलाई कुनै चिन्ता छैन । आधा सम्पत्ती जोगिएकै छ ।
अब आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नुछ । समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर निर्मुल गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार लाल खोल ओढेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । इटहरी खानेपानीमा १८ वर्षदेखि बसेर अध्यक्ष पद खाइरहेको छ । इटहरी खानेपानीमा के त्यस्तो स्वाद छ ? १८ वर्षदेखि पद नछाड्ने ?
चाहे पार्टीले नक्सा पास नगरी बनाएको भवन होस्, चाहे व्यापारीको कम्प्लेक्स होस् । मैले आदेश दिइसकेको छु, डोजर चल्छ ।
इन्जिनियर भन्छन्, डोजर चलाउने पैसा छैन, डोजर चलाउने कार्यविधि छैन । म आफ्नै घडेरी बेचेर डोजर चलाउँछु ।
धेरै बिकृती छ । घरनक्सा शाखा र योजना शाखालाई भनेको छु, कुनै ठेक्का पट्टा र बाटो निर्माण गर्दा एक पैसा पनि लिएको थाहा पाएँ भने राम्रो हुँदैन ।
तलबले तपाइको घर परिवार चल्दैन भने सुब्बा साब जागिर छाडेर व्यापार गर्नुस् । नेता र कार्यकर्तामात्र भ्रष्ट छैन । पत्रकारदेखि कलाकारसम्म भ्रष्ट छन् ।
पत्रकारले नगरपालिकामा हेभी बिल पेश गर्छन् । टेन्डरको विज्ञापन निकाल्छन् । नगरपालिकाबाट लाखौंको बिल दिएर श्रमजीवी पत्रकारलाई
केही हजार रुपैया दिएर मिडिया हाउसले पत्रकारको शोषण गरिरहेको छ । म त्यो मिडिया हाउसलाई भन्न चाहन्छु, जसले डेढ वर्षदेखि मलाई खेदो गर्दै आएको छ । वर्षौंदेखिको सिलसिला थियो ।
हामीले भदौमा नगर सभा गर्यौं । फेस्टिभल मुडमा थियौं । लेखा अधिकृत र स्टोर किपर मिलेर रातारात बिल बनाएर दुई करोड भुक्तानी गरे ।
भुक्तानी हुँदैछ भन्ने कुरा नेतालाई पनि थाहा थियो, पत्रकारलाई पनि थाहा थियो । सचेत गराएनन् ।
जब हाकिमले सरुवा लिए, समाचार आउँछ, सिएफएलमा भ्रष्टाचार, मेयरको संलग्नता, कागजात अख्तियारमा, मेयर अख्तियारको फन्दामा, मेयर थाइल्याण्डमा : सिएफएलमा ४० लाख घोटाला । मानौं म सुटकेसमा कालोधन लिएर बैंकक गएको छु । त्यो मिडियालाई चुनौति दिन चाहन्छु । तिमी र म सँगै जाउँ अख्तियार उजुरी हालौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण मिडियाकर्मीको पनि हुनुपर्छ ।
द्वारिक चौधरीलाई कुनै कुण्ठा छैन । दुई वर्षमा हामीले जति काम गर्नुपथ्र्यो, सकेनौं ।
अख्तियारले मलाई क्लिन चिट दियो ।
एक जना पत्रकारले सोधे, इटहरीलाई विकास नपचेको हो ?
मैले भने, चिया पसलमा डायरी बोकेर विकास देख्न सकिँदैन । विकास हेर्न गाउँ गाउँ जाऊ । तिमीले मलाई कानुन सिकाउनु पर्दैन ।
म पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्न चाहन्छु । तर पीत पत्रकार गर्ने चाटुकारको विरुद्धमा संघर्ष अघि बढाउन चाहन्छु । पत्रकार नभएको भए बहुदल आउने थिएन । ६२/६३ सालको संघर्ष सफल हुने थिएन ।
सञ्चार जगत् स्वतन्त्र तथा सुचनाको हकप्रति सम्मान गर्छु । तर पत्रकारको नाममा व्यापारी धम्क्याउने, समाचारको नाममा धम्काउने । डीभीएमले हडपेको ६० करोड रुपैयाको तीन विगाहा जग्गा नगरपालिका माताहत ल्याइसकियो । सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजि भइरहेको छ । कान खोलेर सुने हुन्छ भूमाफियाहरु, कसैलाई छाडिने छैन ।
तपाई मलाई सोध्नुहुन्छ, ‘तपाई मेयर हो, तपाईको लक्ष्य के हो भनेर सोधेको थियो ।’
मलाई सोध्यो, ‘ह्वाट इज योर एम मेयर ?’
मैले भनेँ, ‘वि विल एचिभ ग्रीन क्लिन इटहरी सिटि इन थ्री एअर ।’
बुझ्नुभएन अंग्रेजी ? मैले भनेँ, ‘तपाई केही वर्षमा हरित सफा सुग्घर इटहरी देख्नुहुन्छ ।’
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा वेस्ट इनर्जी कम्पनिलाई जिम्मा दिएका थियौं । तर निम्छरो रैछ कम्पनि । लगानी जुटाउँदैछन् । सकेनन् भने अर्को कम्पनि बनाउँछौं । टेंग्रा पुलको मर्मत गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको हो । शेरधनले पनि खै गर्न सक्छ, द्वारिकलाले पनि खै गर्न सक्छ बनाउने जिम्मा केपी ओलीको हो ।
मैले चुनावको बेलामा भनेको थिएँ, ‘कहिल्यै धोका हुने छैन ।’
सामान्य मोहि किसानको छोरालाई विश्वास गर्नुभएको छ, कहिल्यै धोका हुने छैन । दुई वर्षमा केही कमी कमजोरी गर्यौं होला । एक जना विद्वान भन्नुहुन्छ, ‘गुड डिसिजन कम्स फ्रम एक्सपेरियन्स । बट एक्सपेरियन्स कम्स फ्रम ब्याड डिसिजन । डन्ट वोरी अबाउट योर मिस्टेक गो अहेड ... ।
बुझियो ? अंग्रेजीमा मै हुँ भन्ने पत्रकारहरु ? म उल्था गर्दिउँ ?
केही पत्रकारले मलाई ह्यारेस गर्न खोज्दैछन् । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ । केही पीत पत्रकारले लेख्दै गर्छ, इटहरीको विकास हुँदै गर्छ ।
म पनि सजिलै थाक्ने होइन । लामिछानेसँग अन्तर्वार्ता हुँदा मेयर त जब्बरै रछ भन्थे । ५१ वर्ष युवा जोस छ । त्यसकारण मैले भनेको छु, विद्रोही कसरी हुन्छ, (पर्शुरामको पौराणिक कथा)
हाम्रा युवा मन, वृद्ध बा आमाको मन पनि विद्रोही भइरहेको छ सम्मान गर्न चाहन्छु । हिजो एउटा दलले गर्न सकेन भनेर आज अर्को दललाई जनादेश दिइएको छ । तर यो दलले पनि काम गर्न सकेन भने म म सत्तारुढ दलका पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, इण्डियामा पनि भ्रष्टाचार भएको कारणले अन्ना हजारे जन्मियो ।
जसरी भारतमा अन्ना हजारे जन्मियो, यदि भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने हो भने अन्ना हजारे र केजरीवाल जन्मिन्छ । मान्छे किन बिद्रोही हुन्छ, ऊर्दूमा एउटा शायर छ (शायरी)
मैले जुन अभियानको नेतृत्व गरेको छु, यसलाई साथ सहयोगको लागि ऐक्यबद्धता जनाउन उपस्थित हुनुभयो, भ्रष्टाचार विरोधीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । भ्रष्टाचारलाई कुचोले बढार्न सकिन्छ ।
यो भाषण इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले इटहरीमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सभामा दिएका हुन् ।